एमालेको सफलता, चुनौती र दायित्व - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
एमालेको सफलता, चुनौती र दायित्व - डा. अमर गिरी
पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको थियो । अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणामका आधारमा दोस्रो चरणकोे निर्वाचनमा पनि एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने देखिएको छ । एमालेले प्राप्त गरेको अग्रता एमालेका नीति, विचार र कार्यक्रमका साथसाथै संविधान निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकासँग जोडिएको छ । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको अत्यन्तै कष्टकर ऐतिहासिक क्षणमा एमालेले साहस र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगलेले निर्वाह गरेको भूमिकाको परिणामका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई लिन सकिन्छ ।
भारतको नाकाबन्दी नेपालका निम्ति नौलो कुरा थिएन तर संविधान निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर गरिएको नाकाबन्दी अत्यन्त दुःखद थियो । यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र गरिमाविरुद्धको ठाडो हमला थियो । यो हामी स्वतन्त्रता र स्वाभिमानपूर्वक जिउन चाहन्छौं र आफ्नो बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र र सक्षम छौं भन्ने नेपाली भावनामाथिको निर्लज्ज हस्तक्षेप थियो । यो नेपालमाथिको बाह्य हस्तक्षेपको निकै डरलाग्दो पछिल्लो कडी थियो । एमालेले यसको दृढतापूर्वक सामना ग¥यो । एमालेको तत्कालीन सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत ग¥यो, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधको शृंखलामा त्यो ऐतिहासिक रह्यो । चीनसँग नयाँ सम्झौता र समझदारीहरू भए, कठिन घडीमा नेपाली मनोबल अझ बलियो बन्यो ।
बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिवादमा नेपाली राजनीतिमा इतिहासदेखि नै गम्भीर कमजोरीहरू रहँदै आएका छन् । यिनै कमजोरीहरूमाथि टेकेर नेपालमाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । नेपाली जनताले कमजोरीहरूको तिखो आलोचना र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रियताका सवालमा सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील रहेको पाइन्छ । नवनिर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन हुनै नदिने मनशायबाट गरिएको नाकाबन्दी, मधेसी दलहरूको सहयोगी भूमिका र नेपालको स्वनिर्णयको अधिकारमाथि भएको ठाडो हमलाको प्रतिवादमा एमाले जसरी अगाडि बढ्यो, यसले उसको सकारात्मक छविलाई ह्वात्तै बढायो । संक्रमणको पीडादायी ऐतिहासिक क्षणमा एमाले यस रूपमा अगाडि नबढेको भए संविधानको कार्यान्वयन पनि सम्भव थिएन ।
संविधानले नेपाली जनतालाई महŒवपूर्ण अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकताको मर्मलाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । संविधान एकैपटक कहीँ पनि पूर्ण हुँदैन, भएको छैन । पटकपटक यसमा संशोधन हुनुको कारण पनि यही हो । नेपालको संविधान जेजस्तो रूपमा निर्माण भएको थियो, त्यो ऐतिहासिक थियो तर केही राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरिएन । विरोधमा झन्डा उचालियो र राजनीतिक अस्थिरता एवं संक्रमणलाई झन्झन् जटिल बनाउने काम गरियो । यो खेल अझै सकिएको छैन । एमालेले यसको प्रतिवाद गर्दै आफूलाई संविधानको पक्षमा उभ्यायो र यसको कार्यान्वयनमा जोड थियो । एमाले मधेसको विरोधमा छैन र हुँदैन । उसको निष्कर्ष संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूबाटै मधेसलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने हो । मधेसी दलहरूका कतिपय मुद्दाहरूलाई एमाले कृत्रिम ठान्छ र यसको सम्बन्ध नेपाल र मधेसको माटोसँग त्यति रहेको देख्दैन । एमालेको अडानलाई मधेसविरोधी, आदिवासी जनजातिविरोधी र ‘आन्धराष्ट्रवाद’ वा ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर आलोचना गरिँदै छ । तर यस्तो आलोचनामा कुनै दम छैन । एमाले न त मधेसविरोधी हो न त आदिवासी जनजातिविरोधी । न त यो अन्धराष्ट्रवादी वा महेन्द्रीय राष्ट्रवादी नै हो ।
नेपालमा बलियो राष्ट्रवादको आवश्यकता छ । राष्ट्रवाद आजको विश्वमा न त असान्दर्भिक भएको छ न त निकट भविष्यमै त्यस्तो कुनै सम्भावना छ । राष्ट्रहरू भौगोलिक सीमारेखाहरूभित्र मात्र छैनन्, मौलिक स्वको अक्षुण्णताको विचारधाराबाट निरन्तर उत्प्रेरित पनि रहँदै आएका छन् । पराराष्ट्रियताको कुरा अहिले पनि प्राज्ञिक विलासभन्दा केही लाग्दैन । भूमण्डलीकरणले राष्ट्रिय सीमा र स्वको अवधारणालाई बदलेको छैन । राष्ट्रिय सीमालाई नाँघेर साँच्चिकै वैश्विक हुने दिन आउला तर अहिले त्यसको कल्पना गर्न सकिन्न । साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद जीवित रहेको बेला यस्तो कल्पना अनर्थकारीसिवाय केही हुँदैन । नेपाललाई कमजोर बनाउने बाह्य प्रयत्नहरू गम्भीर रूपमा भइरहेका बेला एमालेले राष्ट्रवादलाई जुन महŒव दिएको छ, त्यो उपयुक्त छ । एमालेले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा आफूलाई निरन्तर उभ्याउँदै आएको छ तर इतिहासको यस कालखण्डमा उसले यस विषयलाई अझ बढी महŒव प्रदान गरेको छ । यो राष्ट्रवादलाई बढी महŒव दिनुपर्ने घडी पनि हो । अन्धराष्ट्रवाद फासीवादतर्फ डोरिन सक्छ । इतिहासमा यस्तो भएको छ । अन्धराष्ट्रवाद बहुलता र विविधताप्रति असहिष्णु बन्छ र एकरूपीकरणलाई महŒव दिन्छ । एमालेको राष्ट्रवादी चिन्तन यसको विरोधमा छ । प्रगतिशीलता एमालेको राष्ट्रवादी चिन्तनको सार हो । प्रगतिशील राष्ट्रिय चिन्तनको मूल आधार विविधताबीच एकता हो, समान अधिकार, सहअस्तित्व र परस्पर सहिष्णुता हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम जसरी एमालेका पक्षमा आएको छ, एमाले यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रदेश २ को निर्वाचन अझै बाँकी छ । यसमा पनि एमाले पहिलो बन्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्थानीय तहको समग्र विकास र रूपान्तरणमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीको समुचित रूपमा ध्यान जान जरुरी छ । अनुभवको कमी भएका निकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अनुभव सँगालेकाहरूले पनि आफूलाई थप माझ्नु जरुरी छ । समय बदलिएको छ, चुनौतीहरू थपिएका छन्, दायित्व बढेको छ । आदर्श एवं नैतिक मूल्यमा स्खलन आजको कटु यथार्थ हो । राजनीतिक क्षेत्रमा नै नैतिक मूल्यमा सबैभन्दा बढी ह्रास आएको छ । यसप्रति गम्भीर बन्दै यसलाई सुधार्न नसके स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्न सक्छन् । बलियो राष्ट्रिय चेतनाको महŒव आज जति छ, त्योभन्दा कम महŒव नैतिक मूल्यको छैन । आदर्श एवं नैतिक मूल्यमा आएको ह्रासलाई रोक्न नसके राष्ट्रिय भावनाको खास अर्थ रहनेछैन ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजवादतर्फको यात्राका निम्ति स्थानीय तहहरू सबैभन्दा बलिया आधार हुन् । यसका निम्ति स्थानीय तहहरू सबै दृष्टिले ठीक हुनु जरुरी छ । एमालेले यसतिर गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्छ । एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बन्दै छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा पनि पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा सामान्य बहुमत पुग्ने गरी विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । सामान्य बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा असम्भव छैन । जितेका स्थानीय तहहरूको राम्रो सञ्चालन, एमालेको शक्तिको समुचित विन्यास र परिचालन, स्थानीय तहको निर्वाचनका अनुभवहरूको संलेश्षण र प्रभावकारी निर्वाचन रणनीति, पार्टीको आन्तरिक एकताको थप सुदृढीकरण र सशक्त क्रियाशीलताले एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सामान्य बहुमत प्राप्त गर्ने स्थितिमा पु¥याउनेछ । यसबाट एमालेलाई बहुमतका आधारमा सरकार बनाउन ढोका मात्र खुल्नेछैन, मुलुकको रूपान्तरण र समृद्धिका निम्ति काम गर्ने आधार पनि प्राप्त हुनेछ । विगतमा देखिएको सरकार परिवर्तनको अत्यासलाग्दो खेल सकिनेछ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतिपक्षमा रहेर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दै छ । यो सामान्य कुरा होइन । सत्ताले जनमनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने हाम्रो जस्तो पछौटे मुलुकमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको सफलताले यसको सफल आगामी यात्राको संकेत गर्छ । एमालेले यसको सदुपयोग कति गर्छ, भर यसैमा पर्छ । अहिले पनि ठाउँठाउँको निर्वाचनमा सत्ताको दुरूपयोग भएको छ । कतिपय ठाउँमा त्यसलाई एमालेले चिरेको छ, चिर्न नसकेका ठाउँमा हारेको छ । प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । माघसम्म सबै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनका निम्ति समय छोटो रहेको छ । एमालेले यस छोटो समयलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयत्न फेरि पनि हुन सक्छन् । यो सम्भावना पूरै समाप्त भइसकेको छैन । सत्ताले आफू पराजित हुने भएपछि षड्यन्त्रका अनेक व्यूहहरूको रचना गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास यसको अपवाद छैन । देउवाको विगत अगाडि छ । एमालेले यस्ता सम्भावित कुनै पनि षड्यन्त्रहरूलाई चिर्न सक्नुपर्छ र जनतासँगको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनुपर्छ । एमालेको भविष्य उज्यालो छ ।